बुनु थारु - कान्तिपुर समाचार
थारु विगत ५ वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेकी छिन् । उनी स्वास्थ्य तथा सामाजिक विषयमा लेख्न रुची राख्छिन् ।
बुनु थारुका लेखहरु :
सुमन (नाम परिवर्तन) पेसाले स्वास्थ्यकर्मी हुन् । निजी अस्पतालमा कार्यरत उनले दुई साताअघि नै कोरोनाविरुद्धको तेस्रो मात्राको खोप लगाइसके । ‘सधैं संक्रमित बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ, ओमिक्रोन झन् संक्रामक छ,’ ३० वर्षीय उनले भने, ‘सरकारले कहिले दिने हो टुंगो छैन, त्यही भएर लगाइहालेको ।’ उनले अनलाइन फाराम नै नभरी खोप लगाएका रहेछन् ।
अस्पतालमा थपिँदै संक्रमित तर लक्षण सामान्य
कोभिड संक्रमण विस्तारसँगै अस्पतालमा पनि बिरामी भर्नाको दर बढेको छ । कोभिड उपचार गर्ने उपत्यकाका अधिकांश ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामी थपिएका छन् । देशभरका संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामा छन् ।
१० दिनमा ९ गुणाले बढ्यो संक्रमण
कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिइरहे पनि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन । पछिल्ला १० दिनमा संक्रमण दर करिब ९ गुणाले वृद्घि भए पनि परीक्षणको संख्या र दायरा भने पुरानै अवस्थामा छ ।
कोभिड संक्रमण तीव्र विस्तार भएसँगै खोप केन्द्रमा सर्वसाधारणको चाप बढेको छ । बाक्लो जनसंख्या भएको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा २४ वटा मात्रै खोप केन्द्र छन् । केन्द्र बढाएर खोप लगाउने व्यवस्था सहज बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ । यसबाट खोप लगाउन जाने व्यक्तिले सास्ती त पाएका छन् नै, भीडबाट संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ ।
मुस्ताङ र मुगुबाहेक देशका सबै जिल्लामा कोरोना संक्रमण
नेपालमा कोरोना संक्रमण ७५ जिल्लामा देखिएकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे तथ्यांकले काेराेना संक्रमण विस्तार हुन दुई जिल्लामात्र बाँकी रहेकाे देखाउँछ ।
कोभिडको तेस्रो लहर सामना गर्न उपत्यकाका अस्पतालमा के छ तयारी ?
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा अक्सिजन, जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव बेहोरेका अस्पतालहरुलाई ओमिक्रोनको खतराको घन्टीले झस्काएको छ । गत जेठमा देखिएको दोस्रो लहरमा अक्सिजनको संकट बढी देखिएको थियो भने आईसीयू बेडको पनि अभाव थियो ।
खोप लगाउन अझै अलमल, किन बढेन सर्वसाधारणको पहुँच?
रामेछापका ५६ वर्षीय भुवन मगर सिभिल अस्पताल परिसरभित्रको एक निर्माणाधीन भवनमा काम गर्छन् । पाँच महिनादेखि अस्पताल हातामै रहे पनि उनले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छैनन् । ‘लगाउनुपर्छ भनेको त सुनेको हो । यहीँ नै लगाउँछन् भन्ने पनि थाहा भएन,’ अनकनाउँदै उनले भने, ‘अब लगाउनुपर्ला ।’
६ वर्षपछि प्रसूति गृहमा ‘आइभीएफ’ सेवा
छ वर्षपछि थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालमा आइभीएफ (इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन) प्रविधि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । यो विधिमा पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्बलाई कृत्रिम तरिकाले निकालेर प्रयोगशालामा भ्रूण विकास गराएपछि गर्भाधारण गराएर पाठेघरमा प्रत्यारोपण गरिन्छ । २०७२ को भूकम्पले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि यो सेवा बन्द गरिएको थियो ।
ओमिक्रोन फैलिए बालबालिकालाई जोखिम
कोरोना महामारीमा विद्यालय बन्द हुँदा ललितपुर गोदावरीकी बिना थापा बच्चाहरू बिग्रिने हुन् कि भनेर चिन्तत हुन्थिन् । विद्यालय खुल्न थालेपछि भने उनमा भने अर्को चिन्ता थपिएको छ– बच्चाहरूमा संक्रमण पो हुने हो कि ∕ ‘विद्यालय नजाँदा घरमा चकचक गर्छन् भने पीर, विद्यालय जाँदा कोरोना सर्ला भन्ने डर,’ उनले भनिन्, ‘खोप लगाइदिन पाए अलि ढुक्क भइन्थ्यो कि ।’ उनका ८ वर्षीय छोरा र ३ वर्षकी छोरी विद्यालय गइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा देशभर विस्तार हुँदा पनि बढेन आकर्षण
सिन्धुलीका २४ वर्षीय लोकेन्द्र बोगटी मुटु रोगी हुन् । सिन्धुली अस्पतालमा उपचार गराउँदैआएका उनलाई एक हप्ताअघि थप उपचारका लागि अस्पतालले गंगालाल हृदयरोग केन्द्र रेफर गर्‍यो।